Waa maxay shabakadda shabakada? Top 10 Python Laybereeriyada - Khabiirka Cilmiga ah
. Qalabka goosashada ee shabakada waxay ku xiran tahay shabakadda Wet Wide iyadoo la adeegsanayo Qodobka Xawilaadda Qodobka Sharciga, waxay ururiyaan xogta laga helo goobo kala duwan, waxayna u beddeshaa qaab la aqrali karo oo la isku bedeli karo. Kootarasyadu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan ururinta xogta iyo saarista. Waxay ka caawiyaan badbaadinta macluumaadka xayeysiinta ee xog-ururin ku-saleysan xogta loo adeegsado isticmaalka offline.
Boggaga internetka waxaa lagu dhisaa luuqado kale oo barnaamijyo ah sida HTML iyo XHTML. Taasi waa sababta, shirkadaha waxay soo saareen nidaamyo kala duwan shabakadood oo kala duwan nidaam ah waxayna ku tiirsan yihiin DOM kala soocidda, aragtida kombiyuutarka, iyo habka luuqada dabiiciga ah si loogu simo habdhaqanka aadanaha. Maqnaanshaha xogta waxaa loo tixgeliyaa in ay tahay adeeg gaar ah oo farsamo, laakiin waxay faa'iido u leedahay ganacsatada, barnaamijyada, kuwa aan codka lahayn, kuwa websaydhka ah, suxufiyiinta, ganacsatada dhijitaalka ah iyo qorayaasha xorta ah.
A warshad shabakadeed waa API kaa caawineysa in laga saaro macluumaadka goobo kala duwan. Shirkadaha sida Google iyo Amazon waxay bixiyaan adeegyo iyo adeegyo kala duwan oo webka. Noocyada ugu dambeeyay ee shabakadaynta ayaa ah faafaahinta macluumaadka, feedsada RSS, feedhooyinka Twitter, iyo ATOM quudiya. JSON iyo CSV waxaa loo isticmaalaa habka kaydinta gaadiidka ee u dhaxeeya server-yada iyo macmiilaha. Maqalka, Hantid. io, Kimono Labs iyo ParseHub ayaa ah kuwa ugu caansan qalabka duubista webka . Waxay ku yimaadaan labada lacag oo bilaash ah oo lacag ah, waxaanay kuu qaban karaan tiro hawlo ah. Marka la soo dejiyo oo la rakibo, qalabkani wuxuu xoqin karaa boqollaal boggaga internetka saacad.
Ugu sareeya 10 maktabadaha Python ee duubista webka:
Python waa luqad heer sare ah oo barnaamijka. Waxay ka kooban tahay nidaam firfircoon iyo maaraynta xasuusto oo toos ah. Python waxay taageertaa barmaamijyada barnaamijyada kala duwan, sida sheyga ujeedada, habdhaqanka, nidaamka iyo waajibka. Waxay leedahay tiro badan oo ah maktabadaha caadiga ah, laakiin maktabadaha Python ee ugu caansan ayaa lagu sharxay hoos.
Codsiyada waa maktabad Python HTTP oo diiradda saara isdhexgalka shabakadaha kala duwan. Waxay maamuli kartaa cookies, la socodka fadhiyada la isku-dhajiyey, iyo in la qabto goobaha hoos u dhacaya ama waqti dheer qaadanaya si ay uga jawaabaan. Waa rukhsad ay soo saartey Liisanka Apache2, iyo himilada Codsiyada waa in ay u diraan codsiyada HTTP ee qaab saaxiibtinimo leh.
Dareemid waa software ah duubista shabakada oo ka caawisa soo saarida macluumaad faa'iido leh oo ka socda bogagyo kala duwan.
SQLAlchemy waa maktabada macluumaadka oo faa'iido u leh kombiyuutarada iyo kuwa horumariya websaydhka.
Maktabadkan HTML iyo XML ayaa faa'iido u leh freelancers iyo webmaster.
Waa qalab loogu shaqeynayo dukumeentiyada XML iyo HTML. Waxay ka caawisaa qiimeynta xulashooyinka XPath iyo CSS oo raadsadaan waxyaalo isku mid ah shabakadda.
Maktabada Python waxay gacan ka geysaneysaa sidii loo fulin lahaa hawlaha horumarinta ciyaarta 2D.
Waa awood animation 3D iyo mashiinka ciyaarta, taas oo caan ku ah interface interface user-friendly.
8. Nltk (Qalabka Dabiiciga ah ee Dabiiciga ah)
Waxay gacan ka geysataa hagaajinta xarriijimaha kala duwan waxayna samayn kartaa hawlo badan waqti.
Sanku waa qaab baaritaan oo loogu talagalay Python oo loo isticmaalo boqolaal barnaamijka aduunka oo idil.
Iyada oo SymPy, waxaad qaban kartaa hawlo badan oo qiimeynaya tayada boggaaga internetka Source .